Barcelona oo u dhaqaaqday Mendy | Radio Himilo
Home / Cayaaro / Barcelona oo u dhaqaaqday Mendy
Barcelona oo u dhaqaaqday Mendy
Posted by: Mahad Mohamed February 10, 2019
Himilo FM – Barcelona ayaa u aqoonsatay Ferdin Mendy in uu yahay bartilmaameedkooda koowaad ee diirada u saaran inay soo qaataan daafaca biddix xagaaga.
Jordi Alba waa dooqa koowaad ee daafaca biddix ee Barcelona xilligan, laacibka reer Spain ayaa shaqo fiican qabtay tan iyo markii uu kaga soo biiray kooxda Valencia 2012kii. Waxa uu ciyaaray 278 kulan kooxda Blaugrana, illaa iyo haatan wuxuu caawiyay kooxda inay ku guuleysato afar horyaal oo LaLiga ah.
Si kastaba ha ahaatee, Barcelona ma haysato xiddig ku habboon inay ku bedelaan laacibka reer Spain, waxaana ay inta badan ku dhibtoodaan u helidda bedel xilli kasta oo uu dhaawac ku maqan yahay ama ganaax uu jiro.
Ernesto Valverde ayaa dhawaan soo bandhigay walaaciisa ku saabsan xaaladda, waxaana uu u dhararayaa fursad uu kula soo saxiixan karo daafaca biddix marka uu furmo suuqa kala iibsiga.
Dhanka kale, Ferland Mendy ayaa ka mid ah daafacyada biddix ee ugu fiican Ligue 1, waxaana uu qeyb ka ahaa kooxda UNFP Ligue 1 ee sannadka 2017-18.
Sida laga soo xigtay wargeysyada Mundo Deportivo oo soo xigatay Sky Sports, Barcelona ayaa ka fiirsaneysa inay xagaaga u dhaqaaqdo daafaca kooxda Lyon Ferman Mendy.
Agaasimaha kubadda cagta Barcelona, ​​Eric Abidal, oo u soo ciyaaray Barca iyo Lyon intii uu ku guda jiray xirfadiisa ciyaareed ayaa la rumeysan yahay in uu taageere weyn u yahay 23 jirkan reer France.
Si kastaba ha ahaatee, Blaugrana ayaa sidoo kale isha ku heysa xaaladda daafaca Atletico Madrid ee Filipe Luis, kaasi oo qandaraaskiisa uu dhacayo dhammaadka xilli ciyaareedkan.
Barcelona ayaa la ciyaari doonta Athletic Bilbao iyo Real Valladolid kahor inta aysan Mendy ku wajihin tartarka Champions league ee wareegga 16-ka oo ay kooxaha Barcelona iyo Lyon ku cayaarayaan garoonka Olympique Lyonnais lugta koowaad.
Previous: Nin lagu xukumay 8 sanno oo xarig ah markii uu liqay faraanti dhayman ah!
Next: 11 Febraayo- Maalinta caalamiga ee haweenka iyo gabdhaha ee Sayniska